Akụkọ - Usoro mmepe nke onye ebu n’ọdịnihu.
Ebu bụ otu n'ime ndị isi ọrụ ngwaọrụ nke oge a ụlọ ọrụ, lọjistik ígwè na akụrụngwa, bụ ihe ndabere nke ezi uche nzukọ nke uka mmepụta na mechanized eruba usoro. Maka ụlọ ọrụ nke atọ nke lọjistik, ndị ebu ebu bụ ihe eji arụ ọrụ na teknụzụ maka ịhazi ọrụ lọjistik, nke gosipụtara ikike ọrụ nke ngwa ahịa.
Conveyor bụ ihe ndabere nke usoro lọjistik. Site na mmepe na nhazi nke ngwa oru, akụrụngwa akụrụngwa ka emechara ka ọ dịwanye mma. Na akụrụngwa akụrụngwa, ọtụtụ akụrụngwa na-aga n'ihu na-apụta, nke na-ebelata ike ọrụ ndị mmadụ nke ukwuu, na-eme ka arụmọrụ arụmọrụ rụọ ọrụ na ogo ọrụ, na-ebelata ọnụ ahịa lọjistik, na-arụ ọrụ dị mkpa na arụmọrụ lọjistik, ma na-akwalite mmepe ngwa ngwa ngwa ngwa.
N'ọdịnihu, onye ebu ahụ ga-azụlite mmepe buru ibu, na-agbasawanye oke ojiji, nhazi ihe akpaka, belata oriri ike, belata mmetọ na akụkụ ndị ọzọ.
1. Nọgide na-azụlite n'ọtụtụ buru ibu. Nnukwu ọnụ ọgụgụ na-agụnye ikike nnyefe buru ibu, nnukwu otu igwe ogologo na akụkụ na-ezigara ya. Ogologo nke akụrụngwa hydraulic eruola karịa 440 kilomita. Ogologo otu onye na-ebu eriri dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 15, enweela "ụzọ na-ebu eriri eriri" nke nwere ọtụtụ usoro na-ejikọ Party A na Party B. Ọtụtụ mba na-enyocha usoro ihe eji eme njem zuru oke maka ogologo oge na nnukwu ikike na-aga n'ihu erute ihe.
2. Gbasaa ngwa ngwa nke ebu. Mmepe nke okpomoku di elu, onodu ekpomoku di ala, mmekorita, redioaktivu, ihe ndi nwere ike ire oku na gburugburu ebe obibi na aru oru, ma nwee ike ibughari oku di egwu, ihe mgbawa, di nfe inweta agglomerate.
3. Ọdịdị nke onye na-ebufe nwere ike izute ihe achọrọ nke njikwa akpaka nke usoro njikwa ihe maka otu igwe. Iji maa atụ, onye na-ebu trolley ebu nke ụlọ ọrụ nzipu maka ịhazi ngwugwu ga-enwe ike iru ihe a chọrọ.
4. Redbelata ike ike iji chekwaa ike abụrụla akụkụ dị mkpa nke nyocha ahụike na ngalaba nke teknụzụ njem. Ewerela ike nke 1km kwa ton nke ihe eji eme ihe dịka otu n'ime ihe dị mkpa dị na nchịkọta nhọrọ.
5. Belata uzuzu, mkpọtụ na ikpochapu gas nke ndị na-ebugharị dị iche iche mepụtara n’oge ọrụ.